गृहमन्त्रीका भाइ तिलोत्तमा नगरपालिकाको मेयरमा विजयी रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको मेयरमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका भाइ रामकृष्ण खाँण विजयी भएका छन्।
काठमाडौं महानगरको मेयरका ५६ आकाङ्क्षीले पाए ० देखि ६१ हजार मत स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालेन्द्र साह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भएका छन्।
स्थानीय तहमा १४४०२ महिला निर्वाचित, मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी (सूची) वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका ५५ हजार ६९९ मध्ये १४ हजार ४०२ महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्।
बाजुराका सीडीओ र एसपीलाई हटाउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन निर्वाचन आयोगले बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी उपरीक्षकलाई तीन दिनभित्र हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ भने बुढीगंगा नगरपालिकामा पुनः मतदान हुने भएको छ।
यी हुन् २ देखि १०० मतान्तरले जित्ने ५९ पालिका प्रमुख स्थानीय तहको निर्वाचनमा ५९ पालिकामा एक सयभन्दा कम मतले हार-जित भएको छ।
मधेशमा किन खुम्चियो ठाकुरको लोसपा? स्थानीय तहको चुनावमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) मधेशमा खुम्चिएको छ।
स्वतन्त्रबाट जितेका मेयर कांग्रेसको विजय जुलूसमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भएका मनोज साह नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको विजय जुलूसमा सहभागी भएका छन्।
सुकुम्बासी बस्तीबाट उठेर उपमहानगरको मेयर दिउँसो स्कूल जान्थे भने बिहान-बेलुका जमीनदारको हलो जोत्थे। बिदाको दिन त हली हुनैपर्थ्यो। “एसएसली गर्दासम्म हली भएर काम गरें,” उनी भन्छन्।
तुलसीपुरमा एमालेका खड्का र चौधरी निर्वाचित दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्।
जित सुनिश्चित भएपछि बालेनले भने- बाटो बिराउन लाग्यौं भने खबरदारी गर्नुहोला काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा जित सुनिश्चित भएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साह (बालेन) ले आफूलाई सधैं झकझक्याइ राख्न सबैलाई आग्रह गरेका छन्।
काठमाडौंको मेयरमा बालेनको जित सुनिश्चित काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साह (बालेन) को जित सुनिश्चित भएको छ। १९ हजार ३२३ मत गणना बाँकी हुँदा बालेन २० हजार ३७६ मतले अघि छन्।
तुलसीपुर उपमहानगरको मेयर र उपमेयरमा एमालेको जित सुनिश्चित दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवारको जित सुनिश्चित भएको छ।
कुन पदमा कति महिला निर्वाचित भए?
स्थानीय तह निर्वाचनबाट ३४ हजार ७४१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्।
ललितपुर महानगरको मेयरमा कांग्रेस र उपमेयरमा एमाले विजयी, कसले कति मत पाए? ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका चिरिबाबु महर्जन दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका छन्।
पुराना 'किल्ला' भत्किए, जितेका क्षेत्र खुम्चिए स्थानीय तह निर्वाचनमा ठूला राजनीतिक दलहरू आफ्नै आधार क्षेत्र भनिएका तथा अघिल्लो निर्वाचनमा जित हात पारेका पालिकाहरूमै पराजित भएका छन्।
भरतपुरको मेयरमा रेणु दाहाल र उपमेयरमा चित्रसेन अधिकारी विजयी चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन्। मेयरमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) की रेणु दाहाल र उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारी विजयी भएका हुन्।
३४ हजार ४५० जना निर्वाचित‚ कुन पार्टीको कति? स्थानीय तह निर्वाचनमा अहिलेसम्म देशभर ३४ हजार ४५० जना निर्वाचित भइसकेका छन्। गत वैशाख ३० गते देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा ३५ हजार २२१ जनप्रतिनिधिका लागि चुनाव भएको थियो।
पोखराको मेयरमा धनराजको जित सुनिश्चित‚ उपमेयरमा मञ्जुदेवीको अग्रता कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का धनराज आचार्यको जित सुनिश्चित भएको छ।
तुलसीपुरमा साढे ५९ हजार मत गणना‚ कसको कति? दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा खसेको ७४ हजार ३९३ मतमध्ये ५९ हजार ५६३ मतगणना भइसकेको छ। अहिलेसम्म मेयर र उपमेयरमा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवारले अग्रता कायमै राखेका छन्।
भरतपुरको मेयरमा रेणु दाहाल जित नजिक भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) की उम्मेदवार रेणु दाहाल जित नजिक पुगेकी छन्।
रूख चिह्नमा खसेको मत आफ्नोमा गणना गर्नुपर्ने माग सहित एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारले दिए निवेदन नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट काठमाडौं महानगरपालिकाको उपमेयरका उम्मेदवार रामेश्वर श्रेष्ठले रूख र कलम चिह्न दुवैमा खसेको मत आफूले पाउनुपर्ने माग सहित निवेदन दिएका छन्।